Nguva vanaFarao: VaIjipiti vekare munguva hondo
Ancient Egypt. Panotangira zvose zvipenyu zvose zvakanga Farao - mutongi simba anonamatwa. VaIjipiti vekare iye kuteerera zvizere. Farao aipfeka korona miviri (tsvuku uye chena), inomiririra chiratidzo simba rake pamusoro Membros ushe yekare Egypt. Zvinonzi simba rakapiwa gavhuna, akakwanisa kuramba akavhengana, vainamata vamwari vavo, vari kure nomumwe uye vose vaiva netsika dzavo! Saka, shamwari, nhasi tiri nemi zvishoma yokunyatsoongorora kuIjipiti yekare uye kuziva chii - hupenyu nevaIjipiti vekare!
Chinoshamisa nyika yokutanga
Ancient Egypt, zvirokwazvo akabatanidza mupfungwa nomumwe wedu kuti mapiramidhi ... Unlimited ukuru waFarao simba uye akasiya nhaka yavo muIjipiti mutsika. VaIjipiti vekare akavaka makuva husingaperi zvake vatongi vavo. The chepiramidhi raFarao Djoser tanga imba nyanzvi mapurani nguva - muprista Imhotep. Aivawo n'anga, uye somuzivi, uye chipangamazano mukuru kune mutongi amene. Yokutanga Pyramid yaiva 60 metres mukuru! Fungidzira kuti zvainge kumusoro iyoyo? Kazhinji, chikuru guva muIjipiti vakanga chakavakwa mugwenga panguva apo hurumende yaiva imba chechina vanaFarao (Cheops, Chephren, Mycerinus).
Sezvineiwo, kuvakwa mapiramidhi kuti vanaFarao raiva chete ane kuratidzwa kwokunze simba navabati yeEgipita, izvo akabvumira dziite hondo nevaIjipiti vekare, kuvatungamirira chero njanji.
Kubva kukakavara kuti ibatane!
Vachiri simba Farao Mhedziso haana kudzivirira kweIjipiti disintegration uye internecine hondo. Nokukurumidza, nyika nyore rwakakamukana vakaparadzana munzvimbo, kurwa pakati pavo. Makore anopfuura mazana maviri akaramba hondo uye kusagadzikana. Iyi nguva vaIjipiti Ancient pachavo akatumidza pokuwa Guru uye pave paya vanyori venhau dzakaitika vakauti akoromoke yeIjipiti rokutanga. Chinoshamisa vanaFarao iyi vakatevera mumwe anenge mazuva ose! Somuenzaniso, wechitanhatu hwedzinza vatongi 70 zvave nesimba kwemazuva 70 chete!
Middle Kingdom. Nhoroondo nevaIjipiti vekare
Izvi zvakaitika panguva yokutonga Mentuhotep rokutanga regumi youmambo Farao. Egypt yaanotonga akava mumwe nyika zvakare. Nguva iyi inonzi Umambo Middle.
Tinogona kutaura kuti nguva iyi - vamwe akatodzana muzvigadzirwa mberi. VaIjipiti vekare vari kutanga kugadzira zvombo uye nematurusi endarira - ane chiwanikwa yemhangura uye gaba. Pashure endarira akanga akasimba zvikuru kupfuura mhangura, uye nokudaro maoko ake akanga akasimba - kwakawedzera yauinayo. Vakatanga kuonekwa nenyanzvi muchiuto, avo yakahwina dzakawanda munyika.
Simba nyika kwakatosimba, simba Farao akatowedzera simba! Panguva iyi, hapana hieroglyphic manyorero, izvo zvakanyorwa yakawanda yakasiyana nyaya, nyaya, dzidziso uye magwaro kwesayenzi kuti vari zvishoma, asi yakashuma nezvevamwe kuitika mushonga, sainzi uye ouinjiniya.
Kwapera nguva, ari feuds itsva zvakare simba kubatana ichi guru, uye zvinoitika saizvozvo anonzi disintegration weIjipiti Second. Asi ichi, shamwari dzangu, ndiyo imwe nyaya.
Metropolis - imwe nyika-colonizer
Pereslavl-Zaleski: nheyo gore, nhoroondo
Arkady Kamanin: Biography uye pikicha
Zhukov Klim, mumwe munyori wezvakaitika kare: a Biography uye pikicha
Harriet Tubman - African-American abolitionist. Biography pamusoro Harriet Tubman
American mupanduki mutungamiri Joaquin Murieta: Makore oupenyu, ari Biography, mapikicha
Vakadzi zvipfeko "Avili": wongororo uye mapikicha
Nzira dzakawanda kudhakwa nekukurumidza kumba
Mabatirwo chevarwere mishonga kuti endometriosis: panjodzi huru kuti chirwere achiipa
Mutemo mutsva pamusoro fodya - rinotevera vanobwembura kana inoshanda nechiyero?
Huru kufema tsandanyama: fema uye exhale
Zviratidzo zvokutanga kurashikirwa pamuviri in early pregnancy
Vanaamai vaduku: kuwanda kwakadini muzvitsva
Zviitiko zvine chokuita ne geography: geologist, geodesist uye ecologist
Zvokuita kana bvudzi kuwa kubva pashure pokuberekwa kwomwana
Potato muto pamwe croutons: inonaka chisvusvuro!